ढोरपाटनमा एक दशक यताकै उच्च हिमपात, चिसोले जनजीवन प्रभावित ! – ebaglung.com
ढोरपाटनमा एक दशक यताकै उच्च हिमपात, चिसोले जनजीवन प्रभावित !
२०७३ फाल्गुन २८, शनिबार ०८:२०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
विहान ७ बजे देखी पु:न हिमपात सुरु, धारामा पानी लिन जान पनि समस्या !
दिलमायाँ अदै, ढोरपाटन २०७३ फागुन २८ । हिँजो बिहान ४ बजेदेखी परेको हिमपात साँझ पख थामिएपनि अहिले विहान ७ बजे देखी पुन हिमपात सुरु भएपछी ढोरपाटनवासीलाई पानी लिन धारामा जान पनि समस्या परेको छ । ढोरपाटन उपत्यकावासीले अनुभव गरेको चिसो बर्णन साध्य छैन । चिसोले कठ्यांग्रिएका स्थानीय घर बाहिर निस्किन सकेका छैनन् । यतिसम्मकि नित्यकृयाको लागि पनि घरबाहिर निस्कन सास्ती भएको बताउछन् ।
स्थानीय बुढापाकाहरुले पछिल्लो हिमपात एक दशक यताकै यो ठुलो भएको बताएका छन् ।
घर आँगन आसपासका जमिन हिउँले ढाकिएको छ । तीन चार फिट हिमपात भएको छ । ठाउँठाउँ हिउँ जमेर सेताम्य भएको छ । हिमपातबाट मानिसमात्र नभएर गाई बस्तु बढी प्रभावित भएका छन् ।
बोवाङ, अधिकारीचौर लगायतका मानिसहरुको ढोर लेक भुजेलढोर (जस्लाई ढोरपाटन भनिन्छ) त्यस्तै निसीका बासिन्दाहरुको ढोर (लेक) निसेलढोरमा पनि हिमपाताले जनजीवन प्रभावित भएको छ । निसीवासी निसेलढोर पुग्न भारी हिमपातले गर्दा समस्यामा रहेका छन् ।
प्रत्यक वर्ष फागुनको तेश्रो हप्ता देखी चैत महिनाको आधाआधी सम्ममा ढोरमा गाईबस्तु लिएर खेतीपाती गर्न बोवाङ, अधिकारीचौर लगायतका बासिन्दा आउने गर्छन् भने असोज महिनाको चौथो हप्ता सम्ममा गाईबस्तु सहित बेसी गाउँ झर्ने गर्छन् । हालको वर्षा र हिमपातले खेतीपातीका लागी फाईदा पुग्ने स्थानीयले बताएका छन् ।
अपडेट: अहिले विहान ९ बजे पछी हिमपात रोकिएको छ र घाम लागेको छ ।
एक छिन हिमपात रोकिएर घाम लागेपनि केहि समय पछी नै मौसममा आएको परिवर्तन संगै पुन हिमपात सुरु भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, मनेवापाटाको पहिरो हटाउन अझ केहि दिन लाग्ने !